Sihlalutya iHomen's iSteady Mobile + Gimbal, igajethi yefashoni | Iindaba zeGajethi
Hohem iSteady Iselfowuni + Uphengululo lweGimbal
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izixhobo, elektroniki, Reviews
Eli xesha sithetha ngalo esinye sezixhobo esisebenza ngempumelelo mva nje. Ngokukodwa phakathi kwabasebenzisi abanomdla wokufota kunye neevidiyo. Namhlanje sithetha nawe kwiindaba zeGajethi malunga nezinto eziza kwenza iifoto zakho, ngakumbi iividiyo zakho, zinyuke kakhulu kwinqanaba. I-Hohem iSteady Movile + Gimbal.
Siyakuthanda ukuzama izixhobo kunye nezixhobo ezincedisa ii-smartphones zethu. Ngesi sizathu, xa inomdla inje iza ezandleni zethu, kuyonwabisa ukukuxelela ukuba injani okanye isebenza njani. Ewe kunjalo, sikuxelele eyona nto siyithandayo kunye neyona siyithandayo. Ngesi sihlandlo sivela kwisandla sikaHohem, sikwazile ukuqinisekisa ukuba kulula kangakanani ukuyisebenzisa kwaye yintoni enokuphucula ividiyo. Ukuba yeyona nto ubuyifuna, thenga apha iHohem Gimbal iSteady Mobile + kwiAmazon
1 Sichaza ukuba yintoni iGimbal
3 Le yiGimbal Hohem iSteady Mobile +
4 Amazembe amathathu anikezela ukuya kuma-320º wokuhamba
5 Isiko lesicelo elenzelwe igajethi yethu
6 Iinkonzo kunye neengozi zeHohem gimbal
Sichaza ukuba yintoni iGimbal
Kwimeko apho ungazi ukuba sithetha ngantoni. Nangona akukho nto intsha kweli candelo Kusenokwenzeka ukuba awukadibani nenye yezi zinto okwangoku. Isixhobo isetyenziswe iminyaka kwimveliso yefilimu nakumabonwakude ngoku iza kwii-smartphones zethu. Kuqhelekile ukuba awukho semgangathweni ngazo zonke izixhobo kunye nezixhobo. Nkqu Kungabonakala kuwe ujonge iifoto esizibonisa intonga yeselfieSukuba nexhala, siyakuvuyela ukukucacisela.
Ukuze sonke sazi kakuhle ukuba sithetha ngantoni kolu hlaziyo, siza kukuxelela kuqala yintoni le "imbiza" kwaye yenzelwe ntoni?. Igimbal luhlobo lwe iqonga leemoto elilawulwayo, kule meko, enkosi kwibhodi enezinto ezininzi zokuziva. Ihlala injalo accelerometers kunye nekhampasi yamagnetic. Bafumana ntoni, besebenzisa Inkqubo ephucukileyo yealgorithmic, kunjalo gcina uzinzo lomfanekiso othathwe yikhamera ngamaxesha onke.
Yiyo i nangona i-gimbal Esibambe ngayo ikhamera okanye ifowuni hamba, izithonga okanye imifanekiso iya kuhlala izinzilemaxa onke. I-Hohem gimbal esele ikwazile ukuyivavanya ineembazo ezintathu. Nangona kuqhelekile, sifumana ezimbini kuphela. Isixhobo esasetyenziswa kudala ekurekhodeni kwinqanaba lobuchule.
Nge-gimbal ezandleni zakho Asisayi kuphinda sibe neevidiyo ezinokungcangcazela okanye iintshukumo ezenzeka ngequbuliso. Iividiyo esikhe sazithatha zibonelela ngozinzo olwamkelekileyo kakhulu naxa umnini we-gimbal ehamba. Njengoko sibona, isixhobo esinomdla kakhulu esiya sisomelela kwihlabathi le-Smartphone, kwaye kubonakala ngathi iye yahlala.
IGimbal I-Hohem iSteady Movile + Iza zixhotyiswe ngee-asi ezintathu ezinikezela ukuya ku-320º ujike, accelerometers, ikhampasi yamagnetic. Imveliso eyilelwe ukuba Ukuzinza komfanekiso kwiividiyo zethu kuyafumaneka kuye wonke umntu. Kube ngamava kakhulu ukusebenzisa le gimbal kwaye ujonge indlela enkosi kolu hlobo lwezixhobo esinokufumana iziphumo ngalo ngokurekhoda ngefowuni yethu.
IHohem Gimbal iSteady Mobile + iyafumaneka ngoku kwiAmazon
Ixesha lifikile lokuba sibone oko sikufumana ngaphakathi kwebhokisi. Njengoko sisazi, kukho ii-unboxings ezingaphezulu kakhulu kunezinye. Xa sithenga isincedisi se-smartphone asilindelanga kufumana naziphi na izinto ezimangalisayo. Ke, ngaphakathi kwebhokisi ye- I-Hohem Gimbal iSteady Iselfowuni +, siyifumene kanye loo nto.
Ukongeza, njengoko kulindelwe sinayo Intambo yokutshaja ibhetri enegalelo Micro USB. Njengokongeza sinayo isixhobo esincinci kwiGimbal ngokwakhe. Imilenze emincinci Egoqekayo esonga ngendlela elula kakhulu kwisiseko sesitendi. Nabo singayisebenzisa i-gimbal njenge-tripod. Iinkcukacha eziphindaphindayo ukusebenza kwegajethi.
Le yiGimbal Hohem iSteady Mobile +
Ukuthetha malunga noyilo lwesixhobo solu hlobo kunzima. Ingakumbi kuba singaphambili isincedisi apho ukusebenza phantse kubalulekile kwi-100%. Ke ngoko, ukongeza ekuchazeni igajethi ngokwasemzimbeni, sinokukuxelela ngezinto zokwakha. Ngaba yenziwe ngeplastikhi emnyama enganyangekiyo, nge ukuchukumisa okumnandi kwaye unikezela nge ukubamba kakuhle. Ngokomenzi, izixhobo zayo iyakubamba kakuhle kusetyenziso lwexesha elide kunye namathontsi intando.
Inkangeleko yayo, njengoko besesitshilo ekuqaleni, iyafana kakhulu neye-selfie stick, nangona ukusebenza kwayo kuhamba ngakumbi. Ibe inxalenye ngesiphatho sokubamba ngesandla nge ukubamba kwe-ergonomic eqinisekisa ukubanjwa ngokuqinileyo. Singayilawula ikhamera ngazo zonke iindlela onokukhetha kuzo usebenzisa ubhontsi kunye nomnwe wesalathiso.
Kulo indawo engaphambili ngasekhohlo ukusebenzisa ubhontsi esiwufumanayo Iphedi yamaqhosha enokukhetha okuninzi. Ukongeza kwiqhosha layita icimaokanye, "utshintsho" oluncinci esinokuthi sikhethe phakathi kwalo ifoto okanye ividiyo. Kwaye sine indibaniso yovuyo ezakusetyenziselwa ukulawula i-gimbal kunye nayo ikhamera.
Kulo ngasemva yendawo apho ibanjwe khona, sifumana i- iqhosha lokuqalisa. Ngaye sinako "Dubula" iifoto, okanye ukuba sisebenzisa imo yevidiyo, qalisa okanye ume kancinci ukurekhoda. Indawo eyenza ngeminwe emibini kuphelas, isalathiso nobhontsi, sinako ukulawula ngokupheleleyo igajethi kunye nekhamera uqobo. Y ungayifumana kwiAmazon engaphantsi kunokuba ucinga
Amazembe amathathu anikezela ukuya kuma-320º wokuhamba
Ngaphezulu, ngaphezulu kwe "handle", iHohem gimbal inefayile ye- izembe ezintathu zokuhambaokanye. Enkosi kwi de Uqwalaselo olusekwe kwialgorithm, ukusebenza kwayo kugqibelele. Ukusebenza ngokutyibilikayo ngamaxesha onke ukuze umfanekiso ohleli kwi-smartphone uhlala uzinzile kufanelekile ukuba ubonwe. Ukulinganisa kunye nokulungiselela ukufezekiswa kwenza ukuba amava omsebenzisi abe mhle.
Kummandla ophakamileyo sifumana "uqinisa" apho singabeka khona ifowuni okanye ikhamera Iifoto okanye ividiyo. Bala kunye Ingaphakathi ligcwele izinto ezithambileyo ukukhusela i-smartphone yethu. Ukuvula isixhobo kuya kubakho uxinzelelo kwaye ukurekhodwa kuzinzile. Kuxhomekeke kubungakanani begajethi "esincamathelayo" singazandisa izembe ukwenzela ukuba i-angle yokujika ingalahleki.
Ndiyabulela kwi-axis yayo emithathu, I-Hohem iSteady Mobile + gimbal ihlawula ngokugqibeleleyo ukuya kuthi ga kwi-320º ethambisayo okanye ejikelezayo. Singashukuma kwaye sihambise i-gimbal, kodwa ukurekhodwa kuyaqhubeka kweyona ndawo ifanelekileyo. Ukujika kufikelela kuma-320º. Unokwenza izangqa ngesiphatho esisesandleni sakho ngaphandle kwenxalenye apho ikhamera ikhoyo ayihambi.
Ukongeza, enkosi kwinto yovuyo esinayo I-angle ye-pan epheleleyo ye-360º. Njengoko sibona, akukho zimbalwa izinto ezinokusinika le gadget. Kwaye zininzi izinto esingaziphucula kwiividiyo nakwiifoto. Kwaye ukuba ubungazi, awudingi ukuchitha imali eninzi ukuyifumana. Apha ungathenga iHohem Gimbal iSteady Mobile + kwiAmazon ngexabiso elifanelekileyo.
Isiko lesicelo elenzelwe igajethi yethu
Umthuthukisi: Itekhnoloji yeHohem
Ukuba nesakho isicelo esenzelwe isixhobo esisisebenzisayo sisongezo esidibeneyo. Ungaze amava omsebenzisi agqitywe xa sisebenzisa usetyenziso olwenziwe ngabantu besithathu kwisixhobo. Ke ngoko, usebenzisa iApp, sinako ukufikelela kuzo zonke iindlela ezikhoyo ukuba iHohem iSteady Mobile + inayo.
Ngale sicelo sigqibeleleyo sinokudibanisa isixhobo sethu ngendlela ekhawulezayo neyona ilula. Nge-bluetooth esebenzayo, usetyenziso ngokwalo linoxanduva lokudibanisa i-gimbal kunye nefowuni. Nje ukuba yenziwe, ikhamera ye-Smartphone yakho, kwaye ngaphezulu kwako konke iividiyo zakho azisayi kuphinda zifane kwakhona.
Ukuba ukufota kuyindawo ebalulekileyo kuwe kwaye ufuna ukufumana okuninzi ngaphandle kwekhamera ye-Smartphone yakho, ungaphindi ucinge. Sinokukucebisa kuphela le gadget inomdla kwaye isebenzayo, ethi ngokuthe ngcembe ifumane ukuthandwa. Ngaphandle kwamathandabuzo lowo sibe nethamsanqa ngokwaneleyo ukulivavanya, iHohem iSteady Mobile +, iya kugqitha kulindelo lwakho.
Iinkonzo kunye neengozi zeHohem gimbal
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kunokuba kunokubonakala xa uyibona okokuqala isebenza.
Inika imeko kwimeko yokuthwala eneziphedi. Ngaphandle koko iya kuba yinto enzima yokuhambisa.
Ukwakhiwa kwezixhobo ezithandekayo ekuphathweni, zibonelela ngokubamba kakuhle kwaye ziyanyamezela.
Ubungakanani bayo abuyenzi igajethi yokuhlala ihamba nawe yonke imihla okanye endleleni.
Ukusetyenziswa kwayo ngokuqinisekileyo kunokuqondwa njengokulinganiselwe kwiividiyo ezihambayo, nangona singazisebenzisa ngeendlela ezahlukeneyo.
I-Hohem gimbal Steady Imfono +
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Hohem iSteady Iselfowuni + Uphengululo lweGimbal